Maqaamkii ciidamada: Gocosho garnaqsi leh.!!!! - Caasimada Online
Home Warar Maqaamkii ciidamada: Gocosho garnaqsi leh.!!!!
Maqaamkii ciidamada: Gocosho garnaqsi leh.!!!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Tiirka ay Dowladaha ku howl galaan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay Ciiddamadda Qalabka Sida, kuwaasi oo loo dhidbay inay difaacaan dadka iyo dalka.
Khubarada Milliteriga ayaa rumeysan in dib-u-dhiska Ciiddanka weli ku hor gudban yihiin caqabado, o oay ugu horreeyaan iyagoo aan helin Qalab, Daryeel iyo Mushaar ku filan oo joogto ah.
Waxay kaloo Ciiddanka cuqdad nafsi ka qaadeen Ciiddanka AMISOM, kuwaasi oo ay Beesha Calaamka siiyeen Daryeel Khaas, iyagoo ka mushaar iyo nolol fiican Ciiddanka Qaranka.